Kufambisa Wiricheya - Maitiro Ekufambisa Chinyorwa Wiricheya
Chiito chekukurudzira a wiricheya inoenderana nemanyorero mavhiripu izvo zvinogona kuzvifambisa wega nemushandisi, kana ivo vanogona kusundirwa nemumwe kana muchengeti. Kuti uzvifambise wega, mushandisi anofanira kuisa maoko ake pakatarisana ne wiricheya maoko marimu. Ichi chichava chinhu chinoshandiswa pamativi ese echigaro kuti vakwanise kusunda kana kudhonza chigaro sekuona kunoita mushandisi. Unogona kuzvisundira kuenda kumberi kana kumashure kuti ukwanise kudzivirira zvipingaidzo uye isina kuenzana pasi.
Dzidzira Kuparidzira Yako wiricheya
Kudzidza kufambisa a wiricheya unofanira kudzidzira hunyanzvi uhu sezvaungaita nehumwe hunyanzvi hwaunoda kuve nenjere pahuri. Kudzidzira kunoita kwakakwana kana iwe uri kuyedza kudzidza kuzvimisikidza pachako pasina rubatsiro rweumwe munhu. Kune mamwe marudzi emaoko marimu anotendera mushandisi kuzvisimudzira pasina kukuvadza minwe kana maoko. Ergonomic ruoko marimu anotendera mushandisi kusimudzira chigaro achidzivirira mablister kana kumanikidza maronda ekukura pamhedzisiro yavo nekushandisa kwenguva refu. kurudziro wiricheya
Kufambisa Kwemanyore mavhiripu
Kuti uwane wiricheya mushandisi kuzvisundira ivo vanofanirwa kudzidza kudzora iyo wiricheya kuitira kuti vagone kuita nenzira kwayo pavanenge vari kunze kana zvichikosha kuziva chigaro chako. Pakutanga, vanhu vazhinji vatsva ku mavhiripu uve nenguva yakaoma yekugadzirisa kufamba kwechigaro. Nekufamba kwenguva, mushandisi anokudziridza simba repamusoro uye chiyero chiri nani izvo zvinobatsira kufambisa chigaro nyore. Vamwe vashandisi vane dambudziko kushandisa marimu emaoko pamashure mavhiri awo wiricheya. Izvi zvinoenderana nemamiriro avari kutambura parizvino. Muchiitiko chekuti murwere asingakwanise kuzvimisikidza pachavo, ivo vachada muchengeti kuti avasundire mukati nekunze.
Propel Mumba / Kunze
Kufambisa a wiricheya kunze kwakasiyana pane kuendesa mukati. Pane mukana mukuru wekuti iwe ungasangana isina kukwana pasi paunenge uchifamba. Kuti udzivise kuwira pachigaro kana uchinge waenda pamusoro pemapundu kana zvipingaidzo, mushandisi anofanira kuve nechokwadi chekuti vane zvinhu zvakakodzera kuti vakwanise kusvika pakakwirira uye kudzivirira zvipingaidzo. Iwe unogona kunyoresa warandi yako kana iwe watotenga chigadzirwa kubva kune mumwe wevagovera vedu, izvi zvichabatsira mukuchengetedza nguva yekutenga chinhu, uye tinogona zvakare kuchengeta zvinyorwa zvacho kana nguva yasvika yaunoda kushandisa yako garandi. kurudziro wiricheya
Inobatsira Webhusaiti Ruzivo Nezve mavhiripu
Our wiricheya Chigadzirwa Catalog inogona kukubatsira iwe mukutsvaga chaiyo yekufambisa wiricheya, iyo inopa ruzivo mune inorarama katalog fomati, iyo inoita kuti iwe uzere kuburikidza nemapeji uye zvakare inosanganisira yechikamu index, kuitira kuti iwe urikutsvaga yakatarwa mhando yechigadzirwa. Yedu S-Shape Seating peji inosanganisira ruzivo nezve yedu patent S-Shape Seating System, iyo inopa akawanda mabhenefiti pamusoro peyakajairwa wiricheya yemawoko chigaro. Haingori chete kuti kumanikidzwa kunogoverwa zvakaenzana pamakumbo nekumashure, inopawo pekugara pakadzika uye inodzivirira kumberi kutsvedza. Kana iwe uine chero mibvunzo maererano nezve kufambisa wiricheya Ive neshuwa yekutarisa yedu Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo peji, iyo inosanganisira inonyanya kufarirwa uye inogara ichibvunzwa mibvunzo nevatapi vedu uye zvakare vatengi.
Kumira kwedu wiricheya Prototypes peji rinokupa ruzivo nezve yedu Inouya Kumira wiricheya mhando uye zvakare inopa ruzivo rwekuti isu tiri kuchinja sei kumira wiricheya musika nekupa unodhura, uye unogara wakamira-kumusoro mavhiripu kune vatengi vedu. Kana iwe uchida kutarisa yedu chigadzirwa mavhidhiyo nezve propelling wiricheya pakombuta yako, unogona kushanyira yedu youtube chiteshi - http://www.youtube.com/karmanhealthcare kwaunogona kuwana mavhidhiyo nezveese edu zvigadzirwa kusanganisira lightweight mavhiripu, ergonomic mavhiripu, akamira mavhiripu, Uye zvakawanda. Vanhu vanopedza yakawanda nguva yekutsvaga kutsvaga wiricheya izvo zvinouya mupfungwa zvinowanzo nyaradza, mitengo, uye zvido zvezuva nezuva. Isu tinopa yakakura yakakura zvinyorwa uye zvemagetsi mavhiripu, wiricheya zvishongedzo uye zvinotsiva zvikamu. Isu tinopawo mimwe michina yekurapa iyo inoshandiswa kune zvimwe zvinodiwa zvezuva nezuva. Kana iwe uchida kugashira rumwe ruzivo uye kugadzirisa kwemwedzi pamwedzi maererano nekufambisa wiricheya ndokumbirawo unyore kunetsamba yedu, hatikunetsi kazhinji netsamba dzedu, tinozviita nenguva. Kana iwe uchida kutibata nesu nezve kubvunza, ruzivo, kana chero mimwe mibvunzo maererano nezvigadzirwa zvedu, tinokurudzira kushandisa iyo Yekubata Kwedu peji inopa tsamba yemafomu iwe yaunogona kuzadza kuti utumire kwatiri zvakananga. Iyo yepazasi yewebhusaiti yedu inosanganisira ruzivo nezve edu echikamu mapeji, zvakare inosanganisira ruzivo pane internet browser browser, inodzosera mutemo, uye warandi mutemo. Iwe unogona zvakare kutarisa edu wiricheya peji rezvinhu, iro rinosanganisira ruzivo, uye .pdf zvinyorwa nezve yedu yakakura renji ye wiricheya mhando uye zvekurapa zvekushandisa. Kana iwe uchitsvaga nhau uye zvinyorwa nezve indasitiri uye nhau dzazvino kutenderera pasirese, tarisa yedu Nhau uye Zvinyorwa Peji.
Propel Wiricheya Kupfuura Kunyange Nzvimbo
Kufambisa kana Kwete Kufambisa - Iyo Yekufambisa Chirongwa
Imwe Arm Wiricheya
Kufambisa Wiricheya Kubatsira Iyo Inofamba Inopokana Kuenda Kwese
Kuchengetwa Pamwe Paunenge Uchifambisa Wiricheya
Kusarudza Rutsigiro Pamusoro